हामी जनताले समर्थन गर्ने हो कि विरोध ? «
हामी जनताले समर्थन गर्ने हो कि विरोध ?
प्रकाशित मिति : श्रावण ४, २०७५ शुक्रबार
नेपालको जनसंख्या करिब ३ करोड हाराहारी छ । त्यसमध्ये उपत्यकामा मात्र ५० लाखभन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गरिरहेका छन् । अन्य जनसंख्या भने राजधानीभन्दा बाहिर छरिएर रहेका छन् । हाल नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका डा.साबहरूको संख्या १८ हजार हाराहारी छ । विशेषज्ञ साबहरू ४ हजार ७ सय ३७ र सरकारी डा.साबका रूपमा कार्यरतहरू १ हजर ६ सय ६३ जना हुनुहुन्छ । काठमाडौंवरिपरि मात्र ७ वटा मेडिकल कलेज छन् । नेपालमा कार्यरत डा.सा’बहरूको संख्या १० हजारदेखि ११ हजार मात्र रहेको बुझिएको छ । नेपालमा हरेक वर्ष १७ वटा मेडिकल कलेजमा विभिन्न मेडिकल विधामा अध्यनका लागि भर्ना हुने विद्यार्थी संख्या १ हजार ९ सय ५५ रहेको अवस्था छ ।
नेपालका सरकारी, प्राइभेट अस्पतालको व्यवहार हेर्ने हो भने हामी विश्वमै नमुनाका रूपमा छौं । एक जना सरकारी डा.साबले भविष्यमा १० वर्षसम्म राजधानीमा मेडिकल कलेज थप गर्न नहुने माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आउनुभएको छ । उहाँका अनुसार झन्डै २ करोड ५० लाख जनता राजधानीबाहिर रहेका कारण राजधानीबाहेकका क्षेत्रमा त्यस्ता मेडिकल कलेजको खाँचो छ । उहाँले आन्दोलन थालेपश्चात् धेरैजसो अस्पतालमा सेवा दिइरहेका अन्य डा.साबहरू पनि उहाँलाई समर्थन गर्दै आन्दोलनका लागि हातेमालो गर्नुहुन्छ होला । कोही मुखमा टालो बाँधेर त कोही हातमा टालो बाँधेर अनि देशको राजनीतिक दल पनि आफू सत्तामा हुँदा विपक्षमा र सत्तामा नहुँदा समर्थनका लागि आवाज उठाउँदै आन्दोलन चर्काउनुहुन्छ ।
हामी जनता भने यसै पनि अस्पतालको सुविधा लिन जाँदा हेपिने, थर्काइने र डराउनुपर्ने अवस्थामा छौं । डा.साबको आन्दोलनपश्चात् जुम्लाभरिकै स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभाव परेको भन्ने सुनिन्छ । आन्दोलन लम्बिँदै गयो भने यता काठमाडौँतिरका डा.साबहरूले पनि समर्थनमा कामकाज रोक्नुहुन्छ होला । हामी साधारण जनतालाई झनै मर्का पार्दै जानुहोस् । हामी जनताको त अधिकार पनि हुँदैन, हामीले जस्तोसुकै अवस्था पनि सहनुपर्ने हुन्छ । हामीलाई के ठीक के बेठीका बारेमा त्यति जानकार पनि छैनौं र कसैले हामीलाई यस विषयमा बताउन जरुरी देख्दैनन् ।
ए सरकार ! मिल्छ भने तत्काल साँच्चैको विज्ञ टोली गठन गरेर कहाँ मेडिकल कलेज खोल्न हुन्छ, कहाँ हुँदैन, के कारणले हुन्छ, के–कति कारणले हुँदैन भनेर उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ । निर्णय लिँदा कति जनसंख्याका लागि कति चिकित्सक आवश्यक पर्छ, हालका १०–११ हजारको संख्या नै नेपाललाई पुग्ने हो कि ? अर्को मेडिकल कलेज दुर्गममा खोल्दा राम्रो हुने हो कि ? त्यसैगरी अन्य मुलुकको सफल उदाहरणसहित प्रस्तुत भएर समस्याको समाधान गरिदिए हुने थियो । मैले त अझैसम्म यो आन्दोलन केका लागि र यसले कसलाई फाइदा गर्ने हो र कसलाई हानि गर्छ भनेर बुझ्न सकेको छैन । कसैले आन्दोलन गर्दा अरू कसैको पनि अधिकार हनन गर्न हुँदैन भन्नेसम्म चाहिँ मलाई थाहा छ । बिरामीको पनि त अधिकार हुन्छ होला नि ।
आज विश्व समुदाय प्रतिस्पर्दामा आधारित भएर सफल व्यवसाय रहने असफल व्यवसाय बन्द हुने प्रक्रियालाई अँगालेका छन् । हामीले त्यो अँगाल्न नहुने हो कि ? प्रतिस्पर्धामा आधारित भएर काठमाडौंबाहिर आवश्यकता महसुस भएको जुनसुकै ठाउँमा लगानी गरेर मेडिकल कलेज खोल्न दिँदा केही बिग्रन्छ भन्नेचाहिं मलाई थाहा भएन । सबैलाई याद हुनु पर्ने कुराचाहिं सरकारी चिकित्सकले जागिर पनि खाने र आन्दोलन पनि गर्ने, भोलिका दिनमा निजामती सेवामा पनि त्यस्तै गर्नका लागि कुनै सा’ब तयार हुने, विद्यालय धेरै भयो भनेर खोल्न नदिनका लागि अर्का सा’बले आन्दोलन थाल्ने सोचाइका साथ अगाडि बढ्दै जाने हो भने हामी अझै कतातिरको यात्राका लागि प्रस्थान गर्दै कहाँ पुग्ने हो ?